Apple Pay ကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ MasterCard သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ ငါက Mac ကပါ
မင်းစဉ်းစားကြည့် အခမဲ့လန်ဒန်တဝိုက်ခရီးသွားလာ အားလုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်? ။ ဒီသာဖြစ်ပေါ်လျှင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမင်းခရီးသွားနိုင်တယ် မက်ထရို, ရထား, ဘတ်စ်ကားများ လန်ဒန်နှင့် DLR အခမဲ့ လာမယ့်လေးတနင်္လာနေ့သည်, ငါတို့လွန်ပြီဒီတနင်္လာနေ့အပါအဝင်။ သူတို့ကသူမကိုခေါ်မာစတာကဒ်မြှင့်တင်ရေး "အခမဲ့နှုန်းတနင်္လာနေ့"2ကနေနေကြပါတယ်နိုဝင်ဘာ3မှဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက် နှင့်အားလုံးအပေါငျးတို့သ တနင်္လာနေ့ ဒီကာလအလယ်၌ကျလိမ့်မည်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းသင်လုပ်ရမည့်အရာမှာရထား၊ ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ် DLR စီး။ သွားလာရန်အတွက်ဖြစ်သည် Apple Pay ကသင်၏ MasterCard ကဒ်ကိုသုံးသည်။ စဉ် ကန ဦး ငွေကိုသင်၏ကဒ်ထဲသို့သွင်းသည်ဒါဖြစ်လိမ့်မယ် ပြန်လာ ၂၈ ရက်အတွင်းမင်းထံပြန်ပို့ပါ ယုတ္တိနည်းအရဒီမှာကန့်သတ်ချက်ရှိတယ် 27,90 £ MasterCard ကိုင်ဆောင်သူတစ်ယောက်နှုန်း။
ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည့်ကမ်းလှမ်းချက်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်, သင်အနေဖြင့် London Underground၊ Docklands Light Railway, London Overground, TfL Rail, Emirates Air Line မှသွားသောခရီးတစ်ခုစီ၏အစနှင့်အဆုံးတွင် Apple Pay မှ 'အဝါရောင်' ကဒ်စာဖတ်သူမှဤကိရိယာကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ နှင့်လန်ဒန်တွင် (သို့မဟုတ်မည်သည့်ပေါင်းစပ်မှုမျိုး) နှင့်လိုအပ်ပါကကြားကအချက်များတွင်ရှိသောအမျိုးသားမီးရထားလမ်း ၀ န်ဆောင်မှုများ (ကဒ်ဖတ်စက်များရှိသည့်နေရာ) ၏အများစုမှာဖြစ်သည်။ လန်ဒန်မြို့ရှိဘတ်စ်ကားများနှင့်လမ်းရထားများသာသူတို့ခရီးစဉ်အစတွင်အတည်ပြုရမည်။
ပရိုမိုးရှင်းကမ်းလှမ်းမှု၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများရှိနိုင်ပါသည် encontrar ဒီမှာ။ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများကိုလွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုခြင်းနှင့်စတင်ရန်အလွန်ကောင်းသည် Apple Pay ကို။ ထိုအခါငါအမြဲတမ်းသင်တူညီတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေး, စပိန်မှာဘယ်အချိန်လဲ.
Fuentes [MasterCard ကို]
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » MasterCard သည်လန်ဒန်ရှိအများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအတွက်အခမဲ့ငွေပေးချေမှုကိုပေးသည်